Kungani izinwele kuwa besifazane? izizathu
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi kungani izinwele kuwa in abesifazane, nokuthi kuthinta impilo yabo. Izinwele obala njengasenkundleni imvelo bangaphandle izici yangaphakathi. Kuyinto, eqinisweni, ingxenye Impendulo yombuzo othi kungani izinwele kuwa in abesifazane. Isici sokuqala akunakubangelwa sezulu kanye nemvelo, futhi imoto ngisho ngokungalungile ifaniswe. Eyesibili zihlanganisa ukudla okungenamsoco, ukucindezeleka, ezinye izifo zofuzo ezimbi. Nasi uhlu izici ukuthi ngandlela-thile kuphazamise isimo izinwele besifazane (namadoda, kakhulu):
Izejwayezi ezimbi futhi isifo.
Nge ezinye zezinkinga kungenziwa combated, futhi ngakolunye ukuphila ngangokunokwenzeka futhi zama ukunakekela izinwele.
Kungani izinwele kuwa kwabesifazane
Iningi izizathu ngqo eziphathelene nezinto ezithinta izinwele. Nokho, kukhona okukhethwa kukho nezinwele ukuthi musa kuxhomeke ezicini wangaphandle, kodwa zihlobene nempilo yabantu kanye ibhalansi hormone.
Ngakho, kukhona nezinwele, okuthiwa Alopecia androgenetic. Lokhu ukulahlekelwa izinwele, okuyinto eyenzeka ngenxa ukwanda uhlobo oluthile hormone. Ekuqaleni, ngokubona ososayensi abilisiwe phansi yokuthi lesi sifo livela sabesifazane abangakaze (ngobuningi), owesilisa ubulili-hormone okuthiwa i-testosterone. Nokho, ucwaningo olwengeziwe wabonisa ukuthi kwakungelula iqiniso. Eqinisweni, Alopecia androgenetic kungenxa esengeziwe dihydrotestosterone, okuyinto kunomphumela okukhulu ekhanda, kunokuba testosterone.
Odokotela sinqume ukuthi ngaphansi kwezimo ezithile dihydrotestosterone i-hormone ubulala izinwele follicle ekhanda lakho. Kungenxa yokuthi kwenzeka iningi impandla. Futhi zonke ngoba DHT ayilutho the follicle izinwele kangangokuba izinwele abakwazi siqhubeke siphila ezimweni ezinjalo.
Kuyaphawuleka ukuthi ngisho ukwanda kancane kuleli fomu kwe-testosterone kungabangela nezinwele. Abanye abantu kakhulu ebucayi ukuze ngisho iyehla iyenyuka ezincane amakhemikhali kanye nokusungulwa zabo emzimbeni kukhona, lezi zinguquko kungaholela ukuqedela impandla. Lokhu kusebenza kokubili amadoda nabesifazane. Ngokuvamile, ngisho imali evamile yama-hormone kungaholela nezinwele.
By endleleni, uma inani lama-hormone namanje nenze umsindo oshintshashintshayo, kunobungozi ukuqala ukulahlekelwa izinwele zabo. Ngokwesibonelo, ukwehla hormone zesifazane, ukukhulelwa, yegilo ukungasebenzi, noma ekuphathweni izidakamizwa ukuthi ngandlela-thile bukwazi ukuthonya phezu izinwele zikhula zibheke ngakhona.
Kaningi, inqubo nezinwele is iyakhula ngesikhathi menopause lapho i-hormone lokuhlushwa ngokucijile encishisiwe, okungase kubangele ukusabela ngokushesha zomzimba, kuhlanganise nokuthi angase iqothukile ekhanda.
Care - ikhambi kangcono impandla
Ukuze izinwele ayemahle futhi shiny ngaso sonke isikhathi, sebenzisa kuphela izimonyo eliphezulu. Zama ukunciphisa ukusetshenziswa curling ngamaketanga futhi umshini wokomisa izinwele ukuthi izinwele kuphela omisiwe aphange isakhiwo sabo. Uma lokhu kungasebenzi, thatha buso njalo kusukela izithako zemvelo ukuthi ukubuyisela izinwele ezilimele.
Njalo ukuya enkosini ngoba nezinwele, ochwepheshe ukweluleka Ukunquma amathiphu okungenani kanye njalo emavikini amathathu. Musa ukugqoka imisila eside futhi plaits, izinwele owomile kuzokwandisa ukuphula okuhlukene.
Zama ukusebenzisa engashiyi Umbala ejenti, kungcono ukuthatha imoto Umbala , noma colorant yemvelo ngendlela zehena noma Basma.
Njengoba amathonsi lokushisa ukufihla izinwele zakho, bengakuthandi kubanda, imvula nomoya. Uma ungenalo ukugqoka isigqoko, sebenzisa kwenzakalani. Ngakho ukuthathelwa umshuwalense ukuze umelane impandla.
Qiniseka ukubukela ekudleni kwakho, siphuza neziphuzo kakhudlwana namavithamini ebusika, ungathatha Vitamin izakhiwo. Dedela imikhuba emibi, kuyoba amahle, izinwele hhayi kuphela, kodwa futhi izinzipho, isikhumba, namazinyo.
Ekuphetheni, kufanele kusho ukuthi imizwelo eyakhayo uzokunika ubuhle kanye nezikhathi ezimnandi. Ngaphansi kwemizwa, ngoba kuthinta ubuhle izinwele zakho.
Uma lezi ziphakamiso musa ukukusiza, uthintane stylist professional ukukhethwa izimonyo, kanye wesikhumba, beautician futhi owelapha, abangakwazi ukuphendula yonke imibuzo yakho mayelana nokuthi kungani izinwele kuwa in abesifazane.
Iseluleko Key namathiphu. Isiphi isikhathi esingcono kakhulu izinwele ngokuhambisana ikhalenda kwenyanga?
Izinto eziphilayo kwezilwane, noma amaphutha womuntu